Is there going to beaCivil war in Nepal? I dont understand.
Bipin Lamsal said...
यस्सरी त खेदो खन्न भएन नि माओबादीको? अरु नेताहरुले त के पो गरेका छन र? अरु नेता भन्दा माओबादी नेता नै जनताको पक्षमा कुरा गर्छन।
फेरी माओबादीको कुरा गर्यो भनेर यो कमेन्ट मेटाउनु नहोला है?
यथार्थ कुरा खरा हुन्छन्। एकदम चित्त बुझ्यो!
itsareally true . there is big problem in nepal if leaders don't try to think about future immediatly.
sarai man paryo .. samyak ji salaam tapaiko kalam lai ...
yethartha kura ko chitran garnu bhayeko chha samyak ji le. sarai chitta bujhyo.
Bipin ji, tapai le kasari manche ko ragat piune rakta pipasulai sabai bhanda uchakoti ka byakti dheknu bhayo? kripaya uttar pau.
मनको तितो पोख्नका लागि नेपाली राजनीतिमा अलिकति भए पनि आसलाग्दा नेता बाबुरामलाई नै प्रहारको केन्द्र बनाइनुको औचित्य मैले बुझ्न सकिनँ। विचार आ-आफ्नो हो, तर बाबुराम वा अरु कुनै पनि नेताको अन्तर्जातीय विवाहलाई आधार बनाउँदै जातीयताको विरोधका नाममा जातीय अहम् नै झल्किने लेख लेखेर ब्लगको भित्ता रंग्याउनु कत्तिको बुद्धीमानी हो, सोँच्ने जिम्मा लेखकलाई नै।
very good .keep up toch
एउटा गज्जबको कुरा के छ भने ध्रुब पन्थी पथ एक से एक नेपालीमा छ। किन कुनै नेपाली यो नेताले यो ठिक भन्यो यो नेताले यो बेठिक भन्न्यो भन्नुको सट्टा यो नेताले सधैं ठिक भन्छ यो नेताली सधैं गलत भन्छ भनेर ठोकुवा गर्छन। यस्तै कार्यकर्ताहरु जुन नेताले भाषण गर्न पहिल्यै ताली पिट्छन, ले गर्दा थप अन्धो नेताहरु जनमन्छन जस्ले गर्दा नेपाललाइ भंडखालोतिर डोर्याउछन।
कुनै पनि आसलाग्दो नेताले बन्दुकको नाल जनता तिर तेर्दसाउनदैन यस्तो बुझ्न पनि कती गार्हो भाको?
पन्थिजी र अन्य बाउराम सहानुभुतिशिल मित्रहरू,
बाउराम ( प्रवृति) भरोसा लाग्दा नेता हुन भन्ने कुरामा आफ्ना आग्रह आफ्ना ठाउँमा हुनसक्छन् । उनी भरोसा लाग्दा नेता भएको कुनै प्रमाण मसंग छैन , भएमा दिनु होला । यो तर्कमा बाउराम हैन बाबुराम भट्टराई नामका माओवादी नेता अर्थ मन्त्री हुँदा राजश्व बढी उठेको कुरालाई मान्छेले हगाडि ल्याउने गर्छन् जुन कुरा सही हैन । कर र राजश्व बढी उठेका कुरा कुनै बेला रामशरण र अहिलेका सुरेन्द्र पाण्डेले पनि गरेकै छन् । यसका लागि कुन नेता र मन्त्री पिदासीन छन् भन्ने भन्दा पनि कुन अवस्था विद्यमान छ भन्ने कुराको महत्व हुन्छ नेपालका सन्दर्भमा । नेपालमा प्रवृत्तिगत सुधार कहीँ देखापरेको छैन , अझ त्यो हतियारवादी गणतन्त्रको जगजगीमा त हुनै सक्दैन ।
बाबुराम पढेलेखेका मान्छे हुन् त्यो पढाइलेखाइ नरहत्याको इञ्जिनियरिङमा काम लागेको छ नेपाली इतिहासको पानामा । यो नरहत्याको कुण्डमा कुनै बेला स्वयं बाबुराम नै आफ्नै कामरेडको हातको शिकार धन्नै भएनन् , त्यो कुरा तपाईँहरूलाई अवगत पनि होला । नभए केलाउनु होला । अर्को तिर बाबुरामको मन्त्रीत्व कालमा , उनैकी श्रीमति सबैभन्दा गन्हाएकी मन्त्री हुन भन्नुमा अतिशयोक्ति छैन होला । किनभने , सारा टोलछिमेक र इष्टमित्र तथा आफ्ना ९ ओटी मध्ये नेपालमा रहेका सबै दिदी बहिनीलाई सरकारी जागिर र सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने उनै थिइन् । यो कुरा मातृका यादवले पनि बेलाबखत दर्शाइरहेकै छन् । हरेक शुभलाभका अवसरमा दुवै हात पसारेर ज्यूनार गर्ने हिसिलाका पति बाबुराम कसरी त्यति भरोसा लाग्दा भए त्यो पनि बुझ्न गाह्रो छ ।
बाबुरामलाई भारतीय गोटी भनेर मैले लगाएको आरोप हैन बरू उनकै पार्टीका मोहन वैद्य,नेत्र विक्रम चन्द ,र स्वयं प्रचण्डले कहिले घुमाइ फिराई र कहिले सिधै भनेकै हुन । यहाँ तिनैका शब्दलाई उद्धरण गरिएको मात्र हो । अब , अर्काका मुलुकका गोटीलाई हामीले भरोसा लाग्दा मान्यौँ भने , हाम्रो राष्ट्रवादको धज्जी नउड्ला र ? यो विषय र प्रष्ट हुनुपर्‍यो नि , हैन र ?फेरि तपाईँले भरोसा गरेाक नेतालाई माओवादी स्वयंले कत्तिको भरोसा गरेको छ वा निश्चित मात्रामा प्रयोग मात्र गर्न खोजेको छ त्यो पनि हेक्का राख्न पर्यो , हैन र ? नारायणकाजी, कामरेड किरण, बादल, विप्लव र प्रचण्डले नै भरोसा नमान्नेलाई तपाईँ जस्ता सुभेच्छकले मात्र भरोसा गरेर मात्र नि भएन ।
मेरो आलोचना , जातिय संघियता मेरो कलाकारिता हो भनेर दावा गर्ने बाबुराम र बाउरामवादी हतियारवादी गणतन्त्रका बिरुध्द मात्र हो । यो बिशुद्ध रूपमा एउटा नेपाली जनताले गरेको आलोचना हो।
मनुजी, मेरो नाम पछाडि पथ जोडेर मेरो पथ त छुट्ट्याइदिनुभएछ, तर यहाँको पथलाई के संज्ञा दिने होला? मैले बाबुरामलाई आसलाग्दो नेता भनेको झोँकमा मनगढन्ते तर्क जोडेर नेपाल भँड्खालोतिर जाकिनुको कारण पत्ता लगाउने तपाईंको अजीवको क्षमता देख्दा मलाई टीठ मात्र लागेको छ। कृपया मेरो प्रतिकृया एकबाजी फेरि पढ्ने कष्ट गर्नुभए जाती होला। बाबुरामलाई अलिकति आसलाग्दो भन्नुको मतलब बाबुरामले गरेको सबै ठीक भन्ने अर्थ दुनियाँको कुन चाहिँ भाषा र व्याकरणमा लाग्छ, त्यो पनि बुझ्न पाए हुन्थ्यो। तर यहाँलाई ज्ञात रहोस्, म गुण र दोषका आधारमा कुनै पनि नेता र राजनीतिक पार्टीको समर्थन वा आलोचना गर्ने मान्छे हुँ। मलाई न कसैको अन्ध समर्थक हुनु छ न त अन्ध आलोचक नै। र, यो कुरा पनि स्पष्ट होस् कि हाम्रा नेताहरु खराब छन् भन्दैमा सबैलाई एउटै डालोमा हालेर तथानाम गाली गर्दैमा केही हुनेवाला छैन। खराबहरुमा पनि कम खराब नेताहरु कोही छन् भने ती बाबुरामहरु, नरहरिहरु र गगनहरु नै हुन् भन्न मलाई कुनै संकोच छैन, तपाईंलाई जेसुकै लागोस्।
सम्यकजी, तपाईंले बँचेखुचेको भँडास पनि पोख्नुभएछ, मेरो भन्नु केही छैन। रामशरणहरु र बाबुरामलाई एकसमान देख्ने तपाईंका आँखा यति महान रहेछन् कि, तिनको तारिफ गरेर हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि सक्ने छैनन्। तपाईंले भनेजस्तो प्रवृत्तिगत सुधारको म पनि कट्टर पक्षपाती हुँ तर त्यस्तो सुधार एकैचोटि आकाशबाट टप्किँदैन होला न त बाबुराममा हजार दोष देख्नेहरुका लागि कुनै हजार गुण सम्पन्न नेता रातारात पैदा भैदिन्छ होला। हत्याहिंसादेखि जातीयताको राजनीति मैले कहिल्यै समर्थन गर्न सक्ने विषय होइनन्। तर विरोध गर्ने नाममा पृष्ठभूमिका सबै विषयलाई चटक्क बिर्सिएर एकोहोरो राग अलाप्दा आफ्नै धरो फुस्किने सम्भावनाको पनि हेक्का राख्ने हो कि? अति सर्वत्र वर्जयेत्।
राजतन्त्रको भूत अझै वैतरणी तरिसकेको रहनेछ । लेखेर राखे हुन्छ, नेपालमा जातीय विद्वेष कहिल्यै आउनेवाला छैन । यो कसैले चाहेरै हुनेवाला पनि छैन । त्यसैले यो जातीय विद्वेषको डरत्रास आफ्नो हालीमुहाली गुम्ने डरत्रासको उपजमात्र हो ।
Pakhe Nepali said...
यो देशबाट आफ्नो सुरी खुरी अब कहाँ जाला भनेर पहिले नै तर्सेको मृगको मनोदशा भए जस्तो लाग्यो यो ब्लग पड्दा । अझै ३०० बर्ससम्म बेफिक्री एकलौटि जातीय शासन चलाउन त्यो ३००० बर्षको पुरानो पुरेत् शास्त्रले काम दिन छाडे पछि सायद् यस्तै दर्दना निस्कनु स्वभाविक पनि हो कि,यो आधुनिक युगमा। अब बहु भुस्तिग्रे जातीय खटनमा सम्झौता गरी बस्नु पर्ने लाग्छ भने आफ्नै पुर्खेउली मरनच्यसे भुमीमा फर्कनु बुद्धिमानी होला कि, नत्र जातीय स्वास्तित्व र नेपाली अपन्त्वमा मज्जाले मिलेर बस्न किन यत्रा तर्कना?
यो देशबाट कसैको सिरिखुरी कहीँ जाने वाला छैन, लेखेर राख्नुस् । सात पुस्ता बिदेशीको भाडाको टट्टु हुनेहरू त यहाँ महान राष्ट्रवादी कहलाएकै छन् , आफ्नै परिश्रमले मुलुक भित्र आफ्नो भाग्य अजमाउन परिश्रम गर्ने संख्यामा पनि सबै भन्दा बढी नै रहेका तिनीहरूको सिरिखुरी अन्त्य गराउने कसैको आँट होला र ? अनि कसैले कसैको सिरिखुरी अन्त्य गराउँदा , त्यो समूहले पनि टुलुटुलु हेर्दै आत्मसमर्पण गरिरहला र ? तर, प्रश्न उठ्छ के यो कुराले निम्ताउने भयानक द्वन्दलाई हाम्रो मुलुकले धान्ला ? यदि यो सबै रमाईलो नै लागेको हो तपाईँलाई भने यो जात्राले भयानक मनोरञ्जन देओस्, मेरो कामना छ ।
तपाईँ माथि उठाइएको विषय के हो भन्ने कुरामा जानिफकार हुनहुन्छ होला । तर , आलोचनाले वा गालि गलौजले कुनै पात्रका असल गुण थिए र छन् भने , ती कुरालाई यसले तगारो लगाउन्न । बाँकि कुरा बाबुरामका कर्कस कुरा र कुतर्क खड्ग ओलीका बोली भन्दा सुन्न घिन लाग्दा हुने गर्छन् । ऊ सँधै द्वन्द चर्काउने र अरूलाई हान्ने मार्ने कुरा गरिरहन्छन् तर आफ्नै हालत पार्टीभित्र टिठ लाग्दो देखिन्छ। अनि उनैको दावा छ कि अहिलेको माओवादी जातिय संघियताको नक्साको योजनाकार उनै हुन् । यसरी जातिय भागबण्डा लगाउने अधिकार माओवादी वा बाउरामलाई कतै पनि छैन ।